Tababare Thomas Tuchel oo ka hadlay dhaawacyadii Romelu Lukaku iyo Timo Werner kasoo gaaray kulankii ay xalay Chelsea garaacday Malmo – Gool FM
(London) 21 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xalay 4-0 ku garaacday naadiga Malmo FF kulankii saddexaad ee wareegga guruubyada Champions League, hase ahaatee, nasiib darro waxaa dhaawacyo kulanka kaga baxay Romelu Lukaku iyo Timo Werner.
Lukaku ayaa ka dhaawacmay anqowga kaddib markii lagu lagday xerada ganaaxa taasoo ay Blues ku heshay rigoore, halka Werner isaguna 20 daqiiqo kaddib ay dhibaato kasoo gaartay muruqa sidaasna ciyaarta looga saaray labadooda.
Haddaba, tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa ka hadlay xaaladda dhaawac ee labada xiddig iyo suuro galnimada ay kusoo laaban doonaan, isagoo intaas raaciyay inuu xiddigaha doorkooda qaadanayo uu ka doonayo inay goolal dhaliyaan maadaama uu aaminay.
“Waxaan la kulannay dhaawaca Lukaku oo uu anqowga murgacday iyo xaalad muruqa ah oo haleeshay Timo, sidaas darteed, waxaan qiyaasayaa inay maalmo maqnaadaan” ayuu Tuchel u sheegay BT Sport.
“Labadooda qaab wacan ayay ku jireen, qatar ayay ahaayeen, fursado ayey abuuraan goolalna way dhaliyaan, sidaas darteed, waxaynu u baahannahay inaan xalinno, kuwa sugaya fursaddanna ay doorkooda qaataan.
“Tartanka waa uu furan yahya, kuwa kusoo bilaaban doona kulanka Norwich waxay heystaan aaminaaddeenna waxaanna isku dayi doonnaa inaan helno xal cusub.” ayuu hadalkiisa kusoo xiray tababraha Jarmalka ah.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa shan ciyaarood dheeli doonta muddo 15 maalmood ah kahor inta aanan la gaarin ciyaaraha qarammada ee soo aaddan.